China XH507 Dental Unit Manufacturer na Ngwaahịa | Shinva
Enwere ike idozi agba ọkụ ma nwee ụdị ọkụ ọkụ abụọ na-acha ọcha na odo odo, nke nwere ike igbochi nsị resin.
Njikwa mgba ọkụ ọkụ, nchapu stepless ndozi; Enwere ike ibugharị site na otu igodo, nke dị mma maka disinfection ma zere ọrịa na-efe efe.
Box Igbe dị n'akụkụ
Igbe dị n'akụkụ nwere ike gbanwee 90 Celsius, nke dị mfe maka ịrụ ọrụ aka anọ.
Ihe ejikọtara otu ihe na-eme ka mmiri disinfection na-enweghị ike igbochi pipeline na-arụ ọrụ, pipelines na-adịghị ike ma na-adịghị ike iji zere ọrịa obe.
Efere a na-agbapụta nwere ike ịtụgharị 180 Celsius, nke dị mma maka ndị ọrịa iji. Ngwa ngwa nkwụnye na seramiiki spittoon bezin na mmiri nozulu dị mfe maka ọgwụgwọ disinfection.
Ndenye nkwụnye na ike na-adịghị ike mmiri iyo, mpụga nyo ihuenyo, adaba nhicha na mmezi;
■ Liquid kristal ngosipụta
Man-igwe enyi na enyi kwuo interface, aka akara na electronic akara mode;
Ọ nwere ọrụ nke ịbute ihe izizi na ịkpalite koodu mkpu mkpuchi onwe onye maka ọdịda mmalite.
Jikwaa ike nke igwe nhicha ezé, ọsọ ntụgharị nke ngwa ngwa ngwa ngwa, ọsọ ntụgharị, ntụgharị na ntụgharị dị mma na nke na-adịghị mma nke igwe eletriki, wdg.
Inductive ikuku breeki mgba ọkụ akara, mgbanwe na-adaba adaba ọrụ;
Enwere ike ịgba ọgwụ mgbochi silica gel pad maka ihe eji egwu egwu na 134 ℃.
Switch Ngbanwe ụkwụ
Onyinye pedal mgba ọkụ nwere ike ijikwa eweli na pitching nke ọgwụgwọ oche na adiana ọsọ nke ngwá.
Onu ogugu oru, ya na nchikota oru di iche nke ogologo pịa na obere pịa;
■ Igba aluminom ekwe efere, aluminom armrest na ala efere
Akụkụ ndị bụ isi mesiri ike na-eme ka usoro aluminom dị elu na usoro ihe eji emepụta ihe dị iche iche iji hụ na ọ dị ike ma na-ebelata ịdị arọ nke akụrụngwa ahụ. Elu elu na-ebute teknụzụ varnish nke ụgbọ ala, nke mara mma, nwere nkwenye siri ike ma agaghị ada mbà.
■ Ọgwụ disinfectioning
Mgbe a na-arụ paịpụ pipeline na disinfection mgbe niile, naanị ị ga-etinye eriri ngwa ọ bụla n'otu plọg disinfection ma tinye SHINVA disinfectant pụrụ iche. Pịa igodo disinfection na akpaka, na usoro nke disinfection, mmezi na iwepụ pipeline ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka. Disinfection mgbe niile, nchoputa na mmiri ọgwụgwọ na-ezute ihe ndị chọrọ nke GB5749-2016, na-echebe ndị ọrịa na ndị ọrụ ahụike, na-egbochi ọrịa ịrịa ọrịa.
Nke gara aga: RXY Series Saa-Sterilaiz-Jupụta-Akara Line
Osote: Akpaka na-agbanwe agbanwe Endoscope Washer Disinfector